Force of Nature (2020) – MM Subtitles
ပြင်းအားအဆင့်ငါးအထိရှိတဲ့ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဟာ ပေါ်တိုရီကိုဒေသကိုဗဟိုပြုပြီးတိုက်ခတ်လျက်ရှိတာကြောင့် အဲဒီ့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကို ဘေးလွတ်ရာဆီရွှေ့ပြောင်းပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် တိုက်တစ်ခုထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ လူအချို့ကတော့ ခေါင်းမာစွာနဲ့ မိမိတိုက်ခန်းထဲမှာချန်နေရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတွေကို မုန်တိုင်းမပြင်းထန်လာခင် ရအောင်ရွေ့ပြောင်းပေးဖို့အတွက် “ကာဒီးလို”လို့အမည်ရတဲ့ရဲတစ်ယောက်နဲ့ အသစ်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ရဲမေတစ်ယောက်တို့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့အချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်က သူမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်အကောင်လေးကို အစာကျွေးဖို့အတွက်အသားဝယ်ရာမှာ စျေးမှာရှိတဲ့အမဲသားအကုန်ယူခဲ့တဲ့အတွက် ဝယ်သူတစ်ယောက်နဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ထိုသူက ကာဒီးလိုတို့သွားရမယ့်တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုအရင်ဝင်ခေါ်ပြီး တိုက်ခန်းကကျန်တဲ့သူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းဖို့အတွက် သွားကြပါတယ်။
မိမိနေထိုင်ရာတိုက်ခန်းကနေဘယ်ကိုမှထွက်မသွားဘူးလို့ ငြင်းဆန်နေကြတဲ့ ရဲအရာရှိဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်တို့ကိုစည်းရုံးနေတုန်းမှာပဲ အဲ့တိုက်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အလွန်တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ပန်းချီကားတွေကိုခိုးယူဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်ဓားပြတွေရောက်ချလာတဲ့အခါ……
ဒီဓားပြအဖွဲ့ကို ကာဒီးလိုတို့ရဲနှစ်ယောက် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ….
မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေတဲ့အပြင် ဓားပြတွေရောက်လာတာကြောင့် တိုက်ထဲမှာပိတ်မိသွားသလိုဖြစ်နေတဲ့ ကာဒီးလိုတို့တတွေ လွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ပဲ အဆုံးထိ ကြည့်ရှူခံစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ….
Duration……..: 1h 31min
Download 480p G Drive 293 MB
Download 480p Yandex 293 MB
Download 480p MyanCloud 293 MB
Download 720p G Drive 500 MB
Download 720p Yandex 500 MB
Download 720p MyanCloud 500 MB
Download 1080p G Drive 1.1 GB
Download 1080p Yandex 1.1 GB
Download 1080p MyanCloud 1.1 GB